Bit By Bit - su'aalo Waydiinta - 3.6 Sahamis lala xogta kale
Isku xirka sahan in ilo kale xogta awood aad si loo soo saaro qiyaasaha doonayay inay macquul aheyn haddii kale.
sahan intooda badan waa taagnaan-oo keliya, dadaalka is-ku jira. Iyagu ma dhiso on kasta oo kale oo iyagu ma ay ka faa'idaystaan ​​dhammaan xogta kale ee ka jira adduunka. Tani waxay u beddeli doonaa. Waxaa kaliya oo aad u badan in la helay by xiriirinaya xogta sahanka si ay ilo kale oo data, sida xogta raad digital hadlay Cutubka 2. awood Tani in ay xiri sahan in xogta kale KOOBAN xaqiiqda ah in waydiinaya oo logu waa dhameystirta oo aan keydka.
Gaar ahaan, waxaan kala doonaa inta u dhaxaysa laba siyaabood oo kala duwan oo la xiriirinaya weydiinta iyo logu: weydiinta maqalka iyo hodan weydiinaya (Jaantuska 3.10). In la duldhigay maqalka, fiidda digital aan kuwa wax dan toos ahayn awooddooda si ay uga caawiyaan soo saaro qiima badan ka soo xogta sahanka. In la duldhigay la xoojiyey, ayaa dhanka kale, raad ku digital dhab leeyahay qiyaas muhiimka ah oo xiiso leh iyo xogta sahanka dhistaa macnaha guud ee lagama maarmaanka ah oo ku wareegsan.
Jaantuska 3.10: Laba siyaabood ee isku raad digital iyo xogta sahanka. In la duldhigay maqalka (Qaybta 3.6.1) ku raad digital waxaa loo isticmaalaa si xoojin xogta sahanka. In la duldhigay la xoojiyey (Qaybta 3.6.2) ku raad digital dhab leeyihiin qiyaas muhiimka ah oo xiiso leh iyo xogta sahanka dhistaa macnaha guud ee lagama maarmaanka ah oo ku wareegsan.